War - izwi kunzima kakhulu futhi esabekayo, kuzo zonke abantu abawaziyo. Njengoba kahle, lapho ingane akusho ukuthi yini isiteleka emoyeni, umsindo umshini, kungani abantu ecasha ibhomu zokukhosela. Nokho, abantu baseSoviet ebhekene nalo umqondo sethusa futhi azi it mathupha. Akumangazi ukuthi le izincwadi eziningi zilotshwé baye, izingoma, izinkondlo nezindaba. Kulesi sihloko sifuna ukukhuluma ngalokho usebenza mayelana yiMpi Enkulu Yobuzwe namanje ukufunda umhlaba wonke.
"I Dawn Lapha Ingabe epholile"
Umbhali waleli bhuku - Boris Vasilyev. Abalingiswa abasemqoka - anti-aircraft umdubuli kambayimbayi. amantombazane asemancane Five abantu abaye benza isinqumo ukuya phambili. Ekuqaleni abazange ngisho ukwazi ukuthi kudutshulwe kodwa ekugcineni wenza feat yangempela. Kuyinto misebenzi zisikhumbuza ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe ukuthi ngaphambili ayikho iminyaka yobudala, ubulili noma isimo. Konke lokhu akusho lutho, ngoba wonke umuntu iqhubekela phambili kuphela ngoba uyazi umsebenzi wayo ukuze lizwe. Ngamunye amantombazane wayazi ukuthi isitha kumele kumiswe ngazo zonke izindlela.
Encwadini, umlandzi main kuyinto Vasco Usigaxamabhande we okuhlangana kuyo. Lo muntu wafakaza zonke ezethusayo ezenzeka empini. Into embi kunazo zonke kulo msebenzi - ubuqiniso yakhe yokwethembeka kwakhe.
Kukhona zonke izincwadi ezikhuluma ephathelene neMpi Yezwe II, kodwa umsebenzi Yuliana semenova - omunye ethandwa kakhulu. I protagonist - yamaSoviet hlola Isaev, osebenza ngaphansi igama Kusolwa Stirlitz. Nguye wadalula umzamo ka usole American samasosha zezimboni eziyinkimbinkimbi ne abaholi eJalimane lobuNazi.
Kungumsebenzi impikiswano kakhulu futhi eziyinkimbinkimbi. It okwakuthandelene idatha obubhalwe nasekusebenzelaneni nabanye. izinhlamvu babe prototypes zabantu bangempela. Kususelwa kule noveli Semenov uchungechunge yathathwa, sekuyisikhathi eside okuyinto kube at esiqongweni ukuthandwa. Nokho, izinhlamvu ifilimu okulula ukuyiqonda, zingabantu ocacile futhi elula. Encwadini, konke eyinkimbinkimbi kakhulu futhi ezithakazelisayo.
Lokhu inkondlo yabhalwa Aleksandrom Tvardovskim. Umuntu ufuna inkondlo enhle ephathelene neMpi Yezwe II, imele kwasekuqaleni ukuba alinake yayo kule umsebenzi. Kuyinto encyclopedia yangempela, ositshela ukuthi ukuphila kwaba phambili leli sosha abavamile Soviet. Akukho bokubanga, protagonist akuyona wanezelwa - ngumuntu elula, indoda Russian. Basil uthanda ngobuqotho lokhokho bakhe, humorously libhekisela ezinkingeni nangobunzima ungathola indlela yokuphuma isimo esinzima kakhulu.
abagxeki abaningi bakholelwa ukuthi lezi zinkondlo mayelana kweMpi Enkulu Patriotic, eyabhalwa Twardowski, wasiza silondoloze isimo salo amasosha ezejwayelekile 1941-1945. Ngempela, Terkina wonke umuntu oye wabona okuthile zabo, lwendabuko. Kulula ukuthola umuntu naye zibambisana, umakhelwane, nabo baya awuthunqise phezu kwe-lokubikezela, umngane, ngubani wayelele imisele nawe.
Twardowski libonisa impi ngoba lokho, hhayi babenezela ngokoqobo. Umsebenzi wakhe abaningi babheka uhlobo indaba ezempi.
Incwadi Yuri Bondarev ezibonakala uchaza nemicimbi yendawo. Kukhona ezinye imisebenzi mayelana ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, ezichaza esenzakalweni esithile sokushisekela esithile esisodwa. Ngakho lapha - uthi usuku cishe ingxenye eyodwa kuphela, owasinda Drozdowski ibhethri. Kwaba fighters wakhe angqongqoze amathangi amaFascist ababefika kwaseStalingrad.
Lokhu inoveli ekutshela kungaba kanjani uthando ezweni zesikole, abafana abancane izolo. Phela, abantu abasha bakholelwa ngokuqinile imiyalo abaphathi bakhe. Mhlawumbe yingakho ibhethri edume uyakwazi ukusinda ngaphansi umlilo isitha.
Encwadini, isihloko impi ihlobene kakhulu izindaba zokuphila, ukwesaba ukufa, futhi kuhlangene Goodbyes kanye nokuvuma ngokukhululekile. Ngesikhathi umkhiqizo ekupheleni ngebhethri kakhulu simisiwe ngaphansi iqhwa yokuthola. Abalimele ithunyelwa langemuva, amaqhawe ngikweluleke ukhishwa. Kodwa, naphezu enesiphetho esijabulisayo, kusenza sikhumbule - khona siqhubeke silwisana abafana, futhi izinkulungwane kubo.
Izincwadi ephathelene neMpi Yezwe II ukufunda umfundi ngamunye, kodwa hhayi wonke umuntu uyazi kuba umsebenzi Boris Vasiliev elula umfana oneminyaka engu-19 ubudala u-Nicholas Pluzhnikov. I protagonist lesikole lempi ngemuva kokuthola umsebenzi bese kuba induna a Leli qembu. Yena abayokhonza Ingxenye ekhethekile District Western. Ekuqaleni 41st, abaningi babeqiniseka ukuthi impi izoqala, kodwa Nicholas wayengakholelwa ukuthi eJalimane owayengalokotha ukuhlasela i-USSR. The guy uthola e Brest Fortress, futhi ngosuku olulandelayo amaJalimane ahlasela. Kusukela ngalolo suku kuqhubeke ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe.
Lesikhulu sombutho esincane sasikanye lapha owamukela izifundo ekuphileni eyigugu kakhulu. Nicholas manje uyazi ukuthi iphutha nje elincane kungadla njengoba kahle ukuhlola isimo futhi zesinyathelo okufanele basithathe, indlela yokwahlukanisa ngobuqotho kusukela sokukhaphela.
"Indaba Indoda Yangempela"
Kukhona imisebenzi ehlukahlukene enikelwe ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, kodwa kuphela encwadini NGUBORIS Polevoy onjalo phetho emangalisayo. Ngo-Soviet Union eRussia liye zibhaliwe izikhathi ezingaphezu kwekhulu. Lokho le ncwadi yahunyushwa abantu abangaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu izilimi amahlanu. ngokuhlathulula ukusebenza kwawo elahlekile ngisho nenkathi yokuthula. Incwadi lisifundisa ukuba sibe nesibindi, ukusiza noma ubani kwaba esimweni esinzima.
Ngemva indaba yanyatheliswa, umlobi yaqala ukuthola izincwadi ukuthi kwathunyelwa kuye bevela kuyo yonke imizi yakwa-isimo ke enkulukazi. Abantu wambonga izenzo zakhe abahlabelela ngazo liyakhuluma ngokuphela isibindi kanye uthando olukhulu ekuphileni. Umdlali oyinhloko, umshayeli Alexei Maresjev, abaningi baye balahlekelwa izihlobo empini ukuqaphela izihlobo zabo: amadodana, amadoda abazalwane. Kuze kube manje, lo msebenzi ubhekwa edume.
Singakhumbula izindaba ezihlukahlukene mayelana neMpi Patriotic Omkhulu, kodwa umsebenzi Mikhail Sholokhov ijwayelekile cishe wonke umuntu. Ngezinye isisekelo sayo ubeke indaba langempela, okuyinto umbhali wezwa ngo-1946. Wayitshela umuntu nomfana, ayivusa wahlangana kwelinye iphuzu phakathi nendawo.
I protagonist salendzaba okuthiwa Andrei Sokolov. Yena esenyukele kuya phambili, kusukela kwesobunxele, nomkakhe, nezingane zabo ezintathu, futhi umsebenzi omkhulu, futhi ekhaya lakho. Njengoba efika phambi, umuntu uziphathé ngokufaneleyo kakhulu, njalo ukwenza izabelo eziyinkimbinkimbi kakhulu futhi wasiza akanye nalo. Nokho, impi engawayekanga ubani, ngisho kwakwakhiwa kakhulu. Andrei watshisa indlu, kanye nawo wonke umkhaya die yakhe. Okuwukuphela kwento wamgcina kuleli zwe - the Vanya kancane, uhlamvu kabani main enquma beyithatha.
Abalobi waleli bhuku babe Daniil Granin (manje i-isakhamuzi zokuhlonipha Petersburg) kanye Ales Adamovich (umlobi Belarus). Lo msebenzi kungenziwa ngokuthi ngalendoda, okuyinto eqoqa izindaba mayelana yiMpi Enkulu Yobuzwe. Iqukethe hhayi kuphela amarekhodi kusukela Diaries lwabasinda Leningrad ukuvinjelwa, kodwa esiyingqayizivele, izithombe ezingavamile. Kuze kube manje, lo msebenzi uye abe isimo lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa kweqiniso.
Incwadi zibhaliwe izikhathi eziningi ngisho wathembisa ukuthi izotholakala bonke Petersburg imitapo. Granik wathi lokhu msebenzi akuwona umlando ukwesaba abantu, indaba feat yangempela.
Kukhona imisebenzi mayelana kweMpi Enkulu Patriotic, okuyinto akunakwenzeka ukufunda. Roman Aleksandra Fadeeva lichaza izenzakalo zangempela, kodwa akubalulekile. Isihloko umsebenzi - yigama komhlaba enhlanganweni osemusha ogama ubuqhawe akunakwenzeka ukuba ukuhlola. Phakathi nempi, yena eziqhutshwa emzini Krasnodon.
Mayelana amaqhawe ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe ungakhuluma eziningi, kodwa lapho ufunda mayelana abafana namantombazane, ngubani esikhathini esinzima kunazo akesabi ukuhlela ukuketula nokulungiselela zabhikisha ahlomile, emehlweni ume izinyembezi. Ilunga omncane inhlangano engu-14 ubudala, futhi cishe bonke of them bafa ngenxa yala amaNazi abulala.
Umbhali awushintshanga amagama abameleli edume kunazo inhlangano. Sonke siyazi mayelana Oleg Koshevoy, ulyana Gromova nezinye izingane owafa njengokungathi namaqhawe.
"Wena Shagane yami, Shagane". Ukuhlaziywa esenina inkondlo. Umlando sokudalwa